URamaphosa ‘usayine’ esokuholelwa kwabasebenzi u-R20 ngehora | isiZulu
URamaphosa ‘usayine’ esokuholelwa kwabasebenzi u-R20 ngehora
Siphelile isiteleka sabasebenzi base-Unisa
INumsa izosungula iqembu elizolwela abasebenzi
I-ANCYL ifuna abasebenzi baqale ku-R5 000 ukuhola
Cape Town – USekela Mengameli, uCyril Ramaphosa, usesayine isivumelwano seholo eliphansi okungafanele kube khona umsebenzi ohola ngaphansi kwalo (minimum wage), nokuyisivumelwano sokuholela abasebenzi u-R20 ngehora esiphakathi kwemboni yezemisebenzi, ezamabhizinisi kanye nohulumeni.
Lokhu kuvezwe uNobhala Jikelele weFederation of Unions of South Africa (Fedusa), uDennis George, ngoLwesithathu, nalapho eveze ukuthi lesi sivumelwano ekade sabhekwa ngabomvu sisayinwe ngoLwesibili.
OLUNYE UDABA: I-ANCYL ifuna abasebenzi baqale ku-R5 000 ukuhola
Okhulumela uRamaphosa, uRonnie Mamoepa, unqabile ukuqinisekisa lesi sivumelwano ngoLwesibili kusihlwa.
Lesi sivumelwano kufanele engabe sisayinwe ngoLwesibili emhlanganweni wesidlo sasemini we-InvestSA nobusingethwe uMengameli Jacob Zuma eKapa ngaphambi kweState of the Nation address (Sona) ngoLwesine.
Kodwa-ke iHhovisi likaMengameli limemezele ukuthi liyakuhlehlisa ukusayinwa kwalesi sivumelwano ngenxa yokuthi umfelandawonye wezinyunyana zabasebenzi, iCosatu, icele ukuba kuhlehliswe kuze kube iCentral Executive Committee (CEC) yayo ibuyekeza isiphakamiso esisha.
Kodwa-ke ngokusho kukaGeorge, iCosatu ihluleke yancama ukumisa ukusayinwa kwalesi sivumelwano.
Uphinde waveza nokuthi kunokukhathazeka ngokuthi abaqashi bangase banciphise amahora asetshenzwa abasebenzi ngenxa yalesi sivumelwano esisha.